Xaraashka Aan Bixin waraaqaha - Gargaarka Musiibada ee Labada Dhinac
Xaraashka Aan Cod Bixin
Home/updates/Xaraashka Aan Cod Bixin
Maaddaama sanad kale oo doorasho ah ay dhacday oo ay sii socdaan, isla markaana aan u sii dhowaaneyno wax aan la beddeli karin, ayaa musiibo ku dhacda jawigayaga, waxaa naloo xusuusinayaa in rajadayadu ay midba midka kale ku jirto, xiriirka ka dhexeeya iskaashiga labada dhinac ah ee innaga xiraya midba midka kale.
Inbadan oo naga mid ah waxaan qabnaa fikrado aad u kala duwan oo ku saabsan la shaqeynta doorashada "dimoqraadiyada" iyo adeeggeeda (f), laakiin waxaan helnaa go aan guud oo aan ugu codeyno jirkeena maalin walba, oo culeyskayaga u saarna himilooyinkeena iyo hamigeenna, halkii aan ku qori laheyn warqad keliya. ama badhanka maalin uun. Florida gudaheeda, sida ficil-fasiiste kale (DeSantis) kor ugu kaco awooda, waxaan sii wadaynaa inaan beero abuurka aan ognahay inuu xidido u keeni karo qalcadda.
Abuurkaani wuxuu u muuqdaa mid yar: sahayda nadiifinta, sheyga ilmahas, fuushan, daryeel caafimaad iyo wehel u noqoshada hooyo soogalootiga ah iyo qoyskeeda; daryeelka sonkorowga, bixinta daawo qorista, jarista dhirta, sahayda, iyo kaalmaynta helitaanka hoy ku meelgaar ah oo loogu talagalay qoys ballaadhan oo garanaya waxay ula jeedo cimilada duufaanka; saqafyada guryahooda, nadiifinta qashinka, hubinta maxaabiista, qaybinta xirmooyinka xirmooyinka waxyeelada leh, badbaadinta xayawaanka, adkeysiga ka saarista sharci darrada ah, ku dabaqida cadaadis sharciyeed. Waxaan raadineynaa, cod bixinaa, oo aan dhisnaa wax isla qoto dheer oo ka khafiifsan baaxadda awoodda maamul ee awoodda la bixiyo.
Degganayaal badan oo ka tirsan xarumaha gurisiinta dadweynaha ayaa si guul leh ugu adkeystay ka saarista sharci darrada ah, iyagoo ku sii nagaanaya guryahooda iyaga oo sugaya dayactir ama dib u dejin. Weel-ka-dhigista bulshada iyo foornada-loo-beddelo ayaa soo ifbaxday iyadoo milkiileyaashu daminayaan koronto iyo gaas si ay xoog ugu kireystaan ​​guryaha. Haweeney ayaa ka qaylisay dariiqyada oo dhan, "Adiga oo nala jooga, sidoo kale waad cuni kartaa sidoo kale." Waxaan u qaadaneynaa nasasho anagoo ka caawineyna saaxiib cusub inuu dhaqaaqo si uu u dhadhamiyo cuntada iyo daqiiqadda.
Gobolku wuxuu muujiyey karti la'aantiisa (ama rabitaan la'aan) inuu ka jawaabo musiiboyinka cimilada markii lagu qabtay kulan hoolka dadweynaha. Wakiillada FEMA waxay ka weecdeen su'aalaha dhagaystayaasha oo ka koobnaa dadka dakhligoodu hooseeyo ee midabka leh. Wakiilada 'FEMA' waxay si jawaab-celin ah uga jawaabeen, iyaga oo ilaalinaya dadka deggan ee raadinaya jawaabo ku saabsan guryeynta iyo gargaarka maaliyadeed. FEMA waxay sheegatey in gobolka Florida ay codsadeen cagaf-cagafyada 23rd ee Oktoobar laakiin kama jawaabi karaan halka ay joogeen ama haddii ay xitaa imaan lahaayeen dhammaantood. Deggeneyaashu waxay la wadaageen dhibaatooyinkooda helitaanka hoteelada iyo kirooyinka xitaa iyagoo kaashanaya foojarada iyo kaalmada kirada. Guryaha ugu dhow ee la heli karo ayaa u dhexeeya saacadaha 2 illaa 7, kana dhigaysa mid aan loo isticmaali karin kuwa aan gaadiid lahayn iyo kuwa leh shaqooyinka, carruurta, ama qoysaska naafada ah. Arintan la xidhiidha, wakiil wakiil ka ah FEMA ayaa ku jawaabay inay jiraan seddex hoy oo la heli karo. Ka qayb galayaashii hoolka magaalada ayaa si dhakhso leh u saxay, iyagoo tilmaamay inay jirto mid keliya, ayna awood u leedahay.
Raasumaal-nimada Musiibada waxay la kulantay xafiis-ku-maarayn musiibo. Hoos-u-dhigga, hay'adaha sharci-darrada ah iyo milkiileyaasha milkiileyaasha dhiig-miirashada labadaba waxay soo rogaan “xalalkooda” iyo “kaqeybgalkooda” waa qiiq sigaar ah oo lagu khasbo. Dadaallada dhabta ah ee kaqeybgalka ayaa lagama maarmaan u ah awood wadaagga, wax ay gobolka iyo maalgashadayaasha horumarsan ka fogaadaan sida daacuunka.
Iyada oo toddobaadyadu sii gudbayaan, xasuusin muuqaal ah oo ku saabsan burburka Hurricane Michael ayaa wali jirta. Laakiin waxaan baranay dhageysiga. Xitaa culeyska shaqo ee dowladda, xadgudubka milkiilaha, iyo hoy la'aanta cusub ee dad badan, dadku waxay gartaan hab ka duwan oo ah sida ugu macquulsan uguna macquulsan.
"Waan ogahay deriskayga hadda si ka fiican sidii aan ahay sanadihii 14 sano ee la soo dhaafay."
“Dadku waxay ugu fiican yihiin wax walba marka ay xaaladoodu ugu xun yihiin.”
“Had iyo jeer waxaa jira wax wanaagsan oo ka yimaada musiibo.”
Tani waa waxa aan ka maqalno waarayaasha musiibada ee ku sugan Panama City. Oo waxaan ku celcelinnaa.
Markay wadaduhu xumaadaan, marka wadooyinku yihiin kuwa aan la mari karin, kana dhex jira silica iyo khasaaraha, waxaan si cad u aragnaa in waxa aan wada leenahay ay tahay midba midka kale - in cilaaqaadka uu yahay waxa muhimka ah - iyo marka arrimuhu kala go'do, dadku ay isu yimaadaan
Waxaan dhagaysannaa qalbiyadeenna, midba midka kale, shisheeyaha si dhakhso leh saaxiibo u noqdo. Waxaan dhagaysannaa ereyada aan hadalka lahayn iyo digniinta dabaysha. Waxaan dhagaysannaa adduunyo si tartiib tartiib ah u dhimanaya - ama dhalanaya. Ma hubno taas. Waxaan u aragnaa inay wali ku jirto dhamaanteen iyo xulashooyinka aan sameyno. Oday dhaqameed ayaa na baray inaan noqon doonno jiilal aad loo jecel ama aad loo neceb yahay; in naloo yaqaanno jiilka badbaadiyay ama khayaamay nolosha sida aan ognahay.
Soo kabashada oo keliya iyo kala guur sax ah ayaa lagama maarmaan u ah jiritaankeenna wadajirka ah. Hadda waa waqtigii lagu tijaabinlahaa qaabab nololeed oo na siiya dabacsanaan iyo xoriyad aan ku kacno waxaan ognahay in loo baahan yahay in la qabto. Waxaa la joogaa waqtigii lagu heli lahaa xirfado wax ku ool ah iyo aqoon loo adeegsan karo in lagu sii jiito badbaadada dadka ee dhibaatada iyo wixii ka dambeeya.
Dabayl ayaa soo socda. Aynu diyaar u noqonno. Dadnimo, xorriyad, caddaalad, lahaansho iyo, haa, janno waligeed kuma jiri doontid doorashada. Laakiin haddii aan naqaan meesha aan eegno, wali waan ka heli karnaa - midba midka kale.
2018-11-09T14:58:47-05:00November 9th, 2018|updates|